ဂရီလစ်ရ်ှဟာ မန်ယူအတွက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ခေါ်ယူမှုဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်နေတဲ့ ရေးပါလာ – Sports A2Z
အာဆင်နယ်ကစားသမားဟောင်း ရေးပါလာက မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ အက်စတန်ဗီလာကွင်းလယ်လူ ဂျက်ခ် ဂရီလစ်ရ်ှကို ခေါ်ယူဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပြီး သူ့ရဲ့ကစားပုံနဲ့ လုပ်အားနှုန်းတွေဟာ အသင်းအတွက် ကောင်းကောင်းအသုံးဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့ အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။
ကနဦးက ပစ်မှတ်ထားနေခဲ့တဲ့ လက်စတာစီးတီးကွင်းလယ်ကစားသမား ဂျိမ်းစ် မက်ဒီဆန်ရဲ့ ကင်းပါဝါအားကစားကွင်းမှာ စာချုပ်သက်တမ်းတိုး လက်မှတ်ထိုးဖို့ရှိနေတဲ့ အနေအထားတွေကြောင့်လည်း ဗီလာအသင်းခေါင်းဆောင်ဟာ ယူနိုက်တက်ရဲ့ တခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲလာဖို့ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။
ပရီးမီးယားလိဂ်သွင်းဂိုး ၇ ဂိုးနဲ့ ဖန်တီးမှု ၅ ကြိမ် ပြုလုပ်ထားတဲ့ အက်စတန်ဗီလာအသင်းရဲ့ ငယ်မွေးခြံပေါက်ကစားသမားဟာ ဒီရာသီမှာ ပုံစံကောင်းတွေ ပြသနေခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ ခန့်မှန်းတန်ကြေးကလည်း ပေါင်သန်း ၈၀ လောက်အထိ တိုးမြင့်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
? Ray: “Everyone has their price and Jack's worth about £80m!”
? Al: “I’d say £100m!”
? Ray: “He’d be perfect for Man Utd”
? Al: “Utd needaplayer just like him!”
Alan Brazil & Ray Parlour say #MUFC are right to make #AVFC’s Jack Grealish their top transfer target. pic.twitter.com/HNFBAQGheB
— talkSPORT (@talkSPORT) February 5, 2020
“ကစားသမားတိုင်းဟာ သူ့ဈေးနဲ့သူရှိနေပြီး ဂျက်ခ်ကတော့ လက်ရှိဈေးကွက်မှာ ပေါင် သန်း ၈၀ အထက် တန်ကြေးရှိနေနိုင်သလို ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ကစားသမားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပြီး မန်ယူလို အသင်းကြီးတစ်သင်းမှာ ကစားဖို့လိုအပ်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ ထိပ်တန်းအဆင့်မှာ ကစားနိုင်မလားလို့ မေးလာခဲ့ရင် ကျွန်တော်ကတော့ သူကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်မယ်လို့ပဲ ဖြေမိမှာပါ”လို့ ရေးပါလာက Talk Sport ကို ပြောကြားသွားပါတယ်။
ရေးပါလာက ဂရီလစ်ရ်ှဟာ ကွင်းထဲမှာ နေရာစုံ လိုက်ပါကစားတတ်သလို ဘောလုံးလက်ခံဖို့ အမြဲအသင့်ဖြစ်နေတဲ့ ကစားသမားဖြစ်ပြီး ယုံကြည်မှုမြင့်မားသူလည်း ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်သွားခဲ့ပြီး အက်စတန်ဗီလာပရိသတ်တွေတော့ သူ့ကို အသင်းမှာ ဆက်ရှိနေစေချင်ကြမှာဖြစ်လို့ သူ့အနာဂတ်အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ ခက်ခဲနိုင်တယ်လို့လည်း ပြောကြားသွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
UNICODE: အာဆငျနယျကစားသမားဟောငျး ရေးပါလာက မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျတာဝနျရှိသူတှအေနနေဲ့ အကျစတနျဗီလာကှငျးလယျလူ ဂကျြချ ဂရီလဈရျှကို ချေါယူဖို့ တိုကျတှနျးလိုကျပွီး သူ့ရဲ့ကစားပုံနဲ့ လုပျအားနှုနျးတှဟော အသငျးအတှကျ ကောငျးကောငျးအသုံးဝငျမှာဖွဈတယျလို့ အကွံပွုလိုကျပါတယျ။
ကနဦးက ပဈမှတျထားနခေဲ့တဲ့ လကျစတာစီးတီးကှငျးလယျကစားသမား ဂြိမျးဈ မကျဒီဆနျရဲ့ ကငျးပါဝါအားကစားကှငျးမှာ စာခြုပျသကျတမျးတိုး လကျမှတျထိုးဖို့ရှိနတေဲ့ အနအေထားတှကွေောငျ့လညျး ဗီလာအသငျးခေါငျးဆောငျဟာ ယူနိုကျတကျရဲ့ တခွားရှေးခယျြစရာတဈခုအဖွဈ ပွောငျးလဲလာဖို့ ရှိနခေဲ့ပါတယျ။
ပရီးမီးယားလိဂျသှငျးဂိုး ၇ ဂိုးနဲ့ ဖနျတီးမှု ၅ ကွိမျ ပွုလုပျထားတဲ့ အကျစတနျဗီလာအသငျးရဲ့ ငယျမှေးခွံပေါကျကစားသမားဟာ ဒီရာသီမှာ ပုံစံကောငျးတှေ ပွသနခေဲ့ပွီး သူ့ရဲ့ ခနျ့မှနျးတနျကွေးကလညျး ပေါငျသနျး ၈၀ လောကျအထိ တိုးမွငျ့လာခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
“ကစားသမားတိုငျးဟာ သူ့ဈေးနဲ့သူရှိနပွေီး ဂကျြချကတော့ လကျရှိဈေးကှကျမှာ ပေါငျ သနျး ၈၀ အထကျ တနျကွေးရှိနနေိုငျသလို ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ ကစားသမားတဈယောကျလညျးဖွဈပွီး မနျယူလို အသငျးကွီးတဈသငျးမှာ ကစားဖို့လိုအပျတဲ့ စှမျးဆောငျရညျတှပေိုငျဆိုငျထားပါတယျ။ သူ့အနနေဲ့ ထိပျတနျးအဆငျ့မှာ ကစားနိုငျမလားလို့ မေးလာခဲ့ရငျ ကြှနျတျောကတော့ သူကောငျးကောငျးလုပျနိုငျမယျလို့ပဲ ဖွမေိမှာပါ”လို့ ရေးပါလာက Talk Sport ကို ပွောကွားသှားပါတယျ။
ရေးပါလာက ဂရီလဈရျှဟာ ကှငျးထဲမှာ နရောစုံ လိုကျပါကစားတတျသလို ဘောလုံးလကျခံဖို့ အမွဲအသငျ့ဖွဈနတေဲ့ ကစားသမားဖွဈပွီး ယုံကွညျမှုမွငျ့မားသူလညျး ဖွဈကွောငျး သုံးသပျသှားခဲ့ပွီး အကျစတနျဗီလာပရိသတျတှတေော့ သူ့ကို အသငျးမှာ ဆကျရှိနစေခေငျြကွမှာဖွဈလို့ သူ့အနာဂတျအတှကျ ဆုံးဖွတျခကျြခဖြို့ ခကျခဲနိုငျတယျလို့လညျး ပွောကွားသှားခဲ့ကွောငျး သိရှိရပါတယျ။